Oven ngwa mma Manufacturers & Suppliers - China oven ngwa Factory
Gas cooker oven ụzọ nkwado
Okwu Mmalite: Gas cooker oven ụzọ nkwado. Ọnụ ụzọ na-akwado aka ekpe na n'akụkụ aka nri abụọ bụ 1 ụzọ. Na-ejikarị ya maka oven oven. Ngwaọrụ Geriss kwesịrị ekwesị maka ezinụlọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana ọkụ eletrik, ọkachasị maka ụdị ọnụ ụzọ nke 3 KGS - 15 KSGS dị arọ karịa afọ iri.
Nọmba nlereanya: YL-07
Gas cooker oven mkpuchi
Okwu Mmalite: Gas cooker oven mkpuchi. Okwute mkpuchi ekpe na aka nri n'akụkụ abụọ bụ 1 ụzọ. Na-ejikarị ya maka oven oven. Ngwaọrụ Geriss kwesịrị ekwesị maka ezinụlọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana ọkụ eletrik, ọkachasị maka ụdị ọnụ ụzọ nke 3 KGS - 15 KSGS dị arọ karịa afọ iri.
Nọmba nlereanya: YL-19
Nọmba nlereanya: YL-20
Gas cooker ọnụ ụzọ mgbabere uzo
Okwu Mmalite: Gas cooker oven door mebere ekpe na aka nri bụ 1 ụzọ. Mgbabere uzo maka gas cooker ibo ụzọ. Ngwaọrụ Geriss kwesịrị ekwesị maka ezinụlọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana ọkụ eletrik, ọkachasị maka ụdị ọnụ ụzọ nke 3 KGS - 15 KSGS dị arọ karịa afọ iri.
Nọmba nlereanya: YL-17
Okwu Mmalite: Single ntị gas cooker oven ụzọ mgbachi ya ekpe na nri n'akụkụ bụ 1 ụzọ. Mgbabere uzo maka gas cooker ibo ụzọ. Ngwaọrụ Geriss kwesịrị ekwesị maka ezinụlọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana ọkụ eletrik, ọkachasị maka ụdị ọnụ ụzọ nke 3 KGS - 15 KSGS dị arọ karịa afọ iri.
Igwe anaghị agba nchara square aro BBQ oven turnspit / ndụdụ / roaster
Okwu Mmalite: Igwe anaghị agba nchara square aro BBQ oven turnspit / ndụdụ / roaster. Ntughari maka oven oven. Ngwaọrụ Geriss kwesịrị ekwesị maka ezinụlọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana ọkụ eletrik, ọkachasị maka ụdị ọnụ ụzọ nke 3 KGS - 15 KSGS dị arọ karịa afọ iri.
Nọmba nlereanya: YL-18
Gas cooker oven drawer / spring cotter
Okwu Mmalite: Gas cooker oven drawer / spring cotter. Mgbabere uzo maka gas cooker ibo ụzọ ma obu uzo. Ngwaọrụ Geriss kwesịrị ekwesị maka ezinụlọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana ọkụ eletrik, ọkachasị maka ụdị ọnụ ụzọ nke 3 KGS - 15 KSGS dị arọ karịa afọ iri.
Nọmba nlereanya: YL-11
Igwe anaghị agba nchara triangular osisi BBQ oven turnspit / ndụdụ / roaster
Okwu Mmalite: Igwe anaghị agba nchara triangular osisi BBQ oven turnspit / ndụdụ / roaster. Ntughari maka oven oven. Ngwaọrụ Geriss kwesịrị ekwesị maka ezinụlọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana ọkụ eletrik, ọkachasị maka ụdị ọnụ ụzọ nke 3 KGS - 15 KSGS dị arọ karịa afọ iri.
Nọmba nlereanya: YL-06
Okwu Mmalite: Gas cooker oven door mebere ya ekpe na akuku aka nri ya bu uzo abuo. Mgbabere uzo maka gas cooker ibo ụzọ. Ngwaọrụ Geriss kwesịrị ekwesị maka ezinụlọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana ọkụ eletrik, ọkachasị maka ụdị ọnụ ụzọ nke 3 KGS - 15 KSGS dị arọ karịa afọ iri.
Nọmba nlereanya: YL-04
Obere igwe eji esi nri gas
Okwu Mmalite: Obere gas cooker n'ọnụ ụzọ mgbatị ya n'aka ekpe na n'akụkụ aka nri ya bụ ụzọ abụọ. Mgbabere uzo maka gas cooker ibo ụzọ. Ngwaọrụ Geriss kwesịrị ekwesị maka ezinụlọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana ọkụ eletrik, ọkachasị maka ụdị ọnụ ụzọ nke 3 KGS - 15 KSGS dị arọ karịa afọ iri.
Nọmba nlereanya: YL-03
Ugboro abụọ ntị gas cooker n'ọnụ ụzọ mgbabere uzo
Okwu Mmalite:Ugboro abụọ ntị gas cooker oven door n'ọnụ ya ekpe na n'akụkụ aka nri bụ 1 ụzọ. Mgbabere uzo maka gas cooker ibo ụzọ. Ngwaọrụ Geriss kwesịrị ekwesị maka ezinụlọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana ọkụ eletrik, ọkachasị maka ụdị ọnụ ụzọ nke 3 KGS - 15 KSGS dị arọ karịa afọ iri.
Nọmba nlereanya: YL-02